Ungabvarura sei odhiyo CD / DVD muLinux neRuzha Juicer | Kubva kuLinux
Munguva ino apo kushandiswa kweCD / DVD kuri kuramba kuchipera, mimhanzi ichibvaruka iri kukura, pane huwandu hwakawanda hwezvirongwa zvinogona kubvarura maCD odhiyo muLinux, asi mashoma kwazvo ari nyore Ruzha Juicer.
1 Chii chinonzi Sound Juicer?
2 Maitiro ekuisa Sound Juicer
2.1 Isa Inzwi Juicer paUbuntu
2.2 Isa Inzwi Juicer paManjaro
3 Maitiro ekumhanyisa Ruzha Juicer
4 Maitiro ekugadzirisa CD kubvarura neRuzha Juicer
Chii chinonzi Sound Juicer?
Ruzha Juicer iri kumberi-kumagumo GUI yakaitwa muGTK, iyo inobvumidza mushandisi kuti atore odhiyo kubva kumaCD uye aishandure kuita mafomati ayo komputa kana akasiyana matekinoroji zvigadzirwa anogona kubereka. Iyo inobvumira kubvarurwa kweodhiyo codec iyo inotsigirwa neGStreamer plugin, mp3 (kuburikidza neREMA), Ogg Vorbis, FLAC uye PCM mafomati.
Ruzha Juicer yakagadzirirwa kuve nyore kushandisa uye inoshanda nekushomeka kwevashandisi. Semuenzaniso, kana komputa yakabatana neInternet, inozoedza pachayo kutora ruzivo kubva kumaturu emahara anowanikwa muMusicBrainz.
Ruzha Juicer yakasununguka uye yakavhurwa sosi inoenderana nemitemo yeGNU General Public License (GPL). Sezvo yeshanduro 2.10 chikamu chepamutemo chedesktop nharaunda GNOME.
Maitiro ekuisa Sound Juicer
Ruzha Juicer Izvo hazvina kuiswa nekusarudzika mumazhinji kugovera saka zvinogona kuve zvakakosha kuisa kubva kune yekuparadzira's software repository. Tanga nekuvhura software maneja unouya nekugovera kwako.
Tsvaga "sound-juicer" mune software maneja.
Paunenge iwe wawana iko kurudyi chirongwa, tinya bhatani kurodha pasi uye nekuisa yazvino vhezheni inowanikwa kubva kumatura
Iyo Inzwi-Juicer package inosanganisira nekusarudzika kutsigira kwe Vorbis uye mafomati FLAC. Kune zvimwe zvitsigiro tinofanira kuisa:
gstreamer0.10-plugins-yakashata kukodhi kune MP2,
gstreamer0.10-akaremara kukodhi kune MP3,
gstreamer0.10-plugins-chaizvo-zvakashata kunamira kuAAC.
Isa Inzwi Juicer paUbuntu
Isa Inzwi Juicer paManjaro
Maitiro ekumhanyisa Ruzha Juicer
Kamwe yakaiswa Ruzha Juicer isu tinofanirwa kuzviwana mumenu. PaLinux Mint uye Ubuntu, Ruzha Juicer inoratidzwa se "Audio CD Inotora". Tinogona kuiwana muApplications -> Inzwi uye Vhidhiyo.
Kana pasina CD mumotokari, chirongwa ichi hachiite chero chinhu
Kamwe chete odhiyo CD yaiswa, Ruzha Juicer Rinozvionera iro CD uye rinokutendera kuti uzadze ruzivo rwechinyorwa, muimbi, gore, uye kuteedzera ruzivo.
Ruzha Juicer inobatanidza ku Vadivelu Comedy MusicBrainz kuona iyo CD ruzivo. Kana iyo CD isingakwanise kuwanikwa mudhatabhesi yeMusicBrainz unenge uine sarudzo yekuzadza ruzivo rweCD nemaoko uye wotumira disc kuvashandisi venguva yemberi.
Maitiro ekugadzirisa CD kubvarura neRuzha Juicer
Kana iwe uchida kushandisa rakasiyana CD drive, chinja mimhanzi folda kana zita remimhanzi yakabvaruka, kana shandura fomati yemumhanzi, tinya Hora -> Zvaunofarira.
Dzvanya "Hora Maprofayiri" kuti uchinje marongero epamberi ekuti mimhanzi inobvaruka sei. Kune mamwe ma profiles ekubvarura akaisirwa nekukasira uye iwe unogona nyore kuwedzera kana kubvisa profiles.
Simbisa imwe yeaya mafaera uye tinya "Hora" kuti uchinje zita, tsananguro uye kuti GStreamer inomhanya sei kutora mimhanzi.
Kana zvese zvinhu zvagadziriswa, tinya "Bvisa" kuti utange kubvarura CD.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » Ungabvarura sei odhiyo CD / DVD muLinux neRuzha Juicer
Ini ndinoshandisa K3B uye ini handidi chero chirongwa chekubvarura maCD emumhanzi, K3B yakanyatso kukwana. 🙂
alexander galician akadaro
yakanakisa yakapusa uye inoshanda pasuru ndinokutendai zvakanyanya, inoita zvazvinofanira kuita ipapo ipapo
Pindura kuna alejandro gallego
Gabriel Antonio De Oro Berrio akadaro
Kunyangwe maitiro acho ari kutora nguva yakawanda neK3B, zvirinani pane neRuzha Muto. Ndakaiisa pakombuta yangu ne Deepin 20 Beta uye haina kuziva maCD anotyaira, pachinzvimbo K3B yakazviita nekukasira. Izvi zvinoreva kuti Soun Juice haina kuita senge "inoshanda" sezvazvinotaurwa.